Clément Jaona filohan’ny SMM “Tsy olana na volana desambra aza ny fifidianana”
Minisitry ny fizahantany Mpizahatany 500 000 amin’ny taona 2020
Maro ireo fomba hisarihana mpizahatany ho avy eto Madagasikara. Anisan’izany ny fahatongavan’ny sambo lehibe na « paquebot ».
Fanafenana an’i Tania kely Olona iray nidoboka am-ponja
Nokarohina tamin’ny alalan’ny finday nifampiantsoana no nahafantaran’ny polisy fa tany Antanifotsy i Tania kely ka hita afak’omaly atoandro ary tonga teto an-drenivohitra tamin’ny 5 ora harivan’ny alatsinainy teo.
Fahavaratra Hisy rivodoza 2 hamely an’i Madagasikara
Rivodoza miisa 2 hatreto no fantatra fa mety hiditra eto Madagasikara, raha ny fanazavana azo avy eo anivon’ny sampana fampahafantarana ny toetry ny andro.
Ady amin`ny kolikoly Hotsirihana i Madagasikara
Tonga eto amintsika ireo delegasionina roa avy amin`ny Vondrona Afrikanina, ny komitin`ny Vondrona Afrikanina misahana ny kolikoly (CCUAC) sy ny fikambanana ireo rafitra miady amin`ny kolikoly eto Afrika (AAACA),
Maitre Olala “Salama saina tsara aho ary hiverina hiasa.”
Mifarana anio zoma 15 novambra 2019 ny sazy nomen’ny avy eo anivon’ny holafitry ny mpisolovava ho an’ny mpahay lalàna,
Tontolon’ny herinaratra Nanome 26 tapitrisa Euros ny Eoropeanina
Nahazo famatsiam-bola 26 tapitrisa euros (104 miliara ariary) avy amin’ny Vondrona Eoropeanina ny governemanta Malagasy, izay haompana amin’ny fampandrosoana ny tontolon’ny herinaratra.
Ho sahirana ny fanjakana Miha-mafy ny fanoherana ny Tanà-Masoandro
Mitalaho sy mandadilady na manana ny rariny aza ny vahoaka tompon’ny tany eo anatrehan’ny raharaha Ambohitrimanjaka.
Azo hadika ho fanapahan-kevitra politika ny tsy namoahan’ny fanjakana ny didim-panjakana hanatanterahana ny fifidianana ben’ny tanàna.
Safidy politikan’ny mpitondra na hanalava ny fe-potoana hiasan’ny ben’ny tanàna na hametraka Filohan’ny Delegasionina manokana (PDS) hitantana ny kaominina aorian’ny fahataperan’izany ny 18 septambra izao amin’ny 12 ora alina, hoy ny filohan’ny Sendikan’ny mpitsara eto Madagasikara na ny SMM Atoa Clément Jaona. Nambarany fa tsy mbola tara na amin’ny volana desambra aza vao hirosoana ny fifidianana, ary tsy vao izao no nanatanterahana fifidianana tao anatin’ny vanim-potoana fahavaratra, hoy izy. Anisan’izany ny tamin’ny desambra 2013 nifidianana filoham-pirenena, ny 20 desambra 2013 nampiarahana ny fifidianana filoha fihodinana faharoa sy ny solombavambahoaka. Ho an’ny Ivontoerana Safidy, fiarahamonim-pirenena manara-maso ny fifidianana kosa, dia misy kajikajy politika ny fanemorana ny fifidianana, indrindra fa ny mety ho fametrahana PDS satria ireny ihany no hatao kandidan’ny mpitondra ary ho mora ny mampandany azy. Anisan’ny fandresen-dahatra ny fanemorana ny fanadiovana ny lisi-pifianana. Raha ny hevitr’izy ireo, dia azon’ny governemanta atao ny mamoaka lalàna hahafaha-manamarina ny lisitry ny mpividy ivelan’ny fe-potoana hahafahana manao izany, ivelan’ny fotoana ara-dalàna, izay marihina fa ny 01 desambra vao misokatra ny fanavaozana ny lisi-pifidianana.